Mars Series Modular Ups anoshandisa yakakwirira vakarongeka paIndaneti kaviri kutendeuka ano, uye kushanda zvakanaka inogona kusvika 94.5%. Uye musono revatema pamwe azvino date kamuri mazano, ndiro mukuru-rakavimbika wandisa scalable modular kupota hurongwa.
Mars Series Modular kupotamaitiro pamwe zvikuru kuchinja mapurani, uye kuti simba modules vachishandisa paIndaneti hot-swappable design, izvo zvinogona nyore kubviswa, ndakagadza uye vakaramba kana hurongwa achimhanya, asi pasina kukanganisa hurongwa mashandiro uye goho, izvo akaita inivhesitimendi urongwa anouya yechokwadi maererano nezvaidiwa. Izvo vaigona vose kusangana User rakawedzera midziyo inoda Papera nguva, asi kuderedza kwokutanga kutenga mutengo.
Mars Series Modular UPS provides 20KW and 30KW power modules and two kinds of cabinets system, the user can be flexibly configured according to the load demand. The single cabinet can achieve maximum capacity up to 210KW, and provide 2 kinds kupota hurongwa 90KW uye 120KW, izvo zvinogona kuva pakuvara bhatiri modules, nokuti vanoshandisa vanosarudza nyore.
1.High kunyatsoshanda paIndaneti kaviri kutendeutsa michina
Mars dzino modular Ups kureva paIndaneti kaviri kutendeutsa michina dzakakwirira kuita pamusoro 94.5% pa 50% mutoro. It yekudyidzana kunoderedza uchitikurudzira Total Cost tenzi (TCO).
DSP kuzvidzora chinopa nani yokugadzirisa dzakakwirira unongotaura. Revatema pamwe modular magadzirirwo yakafanana ano, huve nyore ramangwana simba kuwedzera.
3.Unity goho simba chinhu
Mars akatevedzana Anorwira kubatana goho simba (kVA = KW) kupa kunonyanyisa simba vachikwanisa basa kutsoropodza zvinorema. It zvinogutsa zvinodiwa azvino servers uye optimizes IT mari pamwe sendi ose.
4.Modular patani lowers MTTR
Modular magadzirirwo rinoshandisirwa musimba module, STS module uye matochi module. Zvichava nyore yokuzvigadzirisa uye pakutsiva ne pasi MTTR (Ngaave Time To Repair).
5.Ease naro uye kugadzira
Akavaka-pakuita yokunzvenga anovimbisa simba chokuramba kutsoropodza mitoro panguva kupota yokuzvigadzirisa. Kunze, kuti zviite chokugadza nazvo, zvose remadziro kuzvidzora uye connectors vari Accessibility pamberi.
6.Flexible bhatiri configuration zvinoenderana mafomu siyana
Battery nhamba zvinogona kugadziridzwa flexibly. Zvichaita kujaira zvakasiyana simba zvinoda uye kupfupisa hurongwa downtime. Battery voltage anogona kuisa kubva 32 kusvika 40 zvidimbu muzana tambo.
7.Adjustable ndinorova razvino
Anogovera kunonyanyisa 8a ndinorova pari nerimwe simba module uye zviri chinjika kwakavakirwa chinodiwa.
8.High zadzisa kugona
Modular Ups inotsigira, 110% zadzisa kwemaminitsi 60, 120% kwemaminitsi 10, uye 150% nokuti 1 miniti.
9.Graphic 5.7 "LCD magadzirirwo nyore utariri
Rakagadzirirwa nyore utariri, akashongedzerwa ne 5.7 "hwakajeka LCD chidzitiro. Nzwisisa magadzirirwo kunonatsiridza akaratidza ruzivo kuzivikanwa uye yemhando configuration.
10.N + 1 kana N + X yakafanana redundancy simba zvinovimbisa
Scalable akitekicha unokubvumira optimize mutengo mari kusangana simba zvinorayirwa kubudikidza vertically kuwedzera chinhu chete pani yakakomberedzwa kubva 20KVA kuna 210KVA pazvinangwa N + 1 kana N + X redundancy zvakafanana pani.
zera, D X W X H (mm)
Dzimwe nhengo dzeParamende-20KW
Dzimwe nhengo dzeParamende-30KW
Dzimwe nhengo dzeParamende-Battery
Hurukuro: Mumwe bhatiri module rine 10pcs pamusoro 12V9AH chisimbiso vatungamirire asidhi mabhatiri mune imwe tireyi. Mumwe kwakakwana bhatiri yakatarwa rine 4 bhatiri modules.
20KVA-210KVA (vatatu-dzi uye Three outs)
3-danho muna / 3-danho kunze
Akavaka-muna Battery Module
Cabinet Net Weight (Gen.)
305 ~ 477VAC pa 100% Load; 208 ~ 304VAC pa <70% Load
50 / 60Hz (Auto Vakaona)
> 0.99 @ 100% Mutoro,> 0,98 @ 50% Load
Harmonic kusarurama (THDi)
Voltage Regulation (rakadzikama state)
≦ ± 1% Typical (Nemwero Mutoro); ≦ ± 2% Typical (kusina kunaka kwakanga Load)
Voltage Regulation (Hupfupi)
≦ ± 5% Typical
Frequency Range (Zvaenderaniswa)
46Hz ~ 54Hz kana 56Hz ~ 64Hz
1 awa 110%, 10 min kuti 120%, 1 Maminitsi kuti 150%, 200ms nokuti> 150%
≦ 1,5% THD (Linear Mutoro); ≦ 4% THD (Non-Linear Load)
Kuyangarara Charging Voltage
Vavandudze Charging Voltage
Maximum ndinorova Current
8a nerimwe simba module (User chinjika)
IEC / EN 62040-2 Category C3
<1000m nokuti chezita simba
Broadcasting uye Terevhizheni
Previous: 1-3KVA High Frequency Rack kupota Next:40-120KVA High Frequency Online Ups (3: 3)